Sida Loo Kala Saaro Xisaabaadka Bangiga ee Miisaaniyadda 2022 - Kiiky Wealth
Bogga ugu weyn Sida Loo Kala Saaro Xisaabaadka Bangiyada ee Miisaaniyadda 2022 -ka
Habka ugu fiican ee aad si fiican ugu maareyn karto lacagtaada waa inaad kala soocdo akoonnada bangiga ee miisaaniyadda. Taasi waa, waxaad dejisay xawaalado otomaatig ah si aad uga guurto lacagaha lagugu shubo jeegag kala duwan, keydin iyo xisaabaad kharash bixin.
Marka aad xisaabinayso xisaabaadkaaga, waxaad u baahan tahay inaad samaysato wareejin toos ah si aad faa'iidadaada ugu dirto; Koontada 'kharashyada go'an'; Koontada kaydka, koontadaada kharashka
SI: 20 siyaabood ee ugu jaban ee aad naftaada u maal gashan karto 2022 | Talada Khabiirka
'Kharashaadka go'an', waxaan ula jeedaa kharashyada 'khasabka/khasabka ah' sida biilasha, dayactirka guriga, hagaajinta baabuurka, iwm.
Maqaalkani waxa uu ku tusi doonaa sida loo kala saaro xisaabaadka bangiyada ee miisaaniyada 2022. Waxa kale oo aad baran doontaa sidaad u samaysan lahayd xisaabaadka jeegaga iyo kaydka hab kaa caawin doona inaad biilashaada ku bixiso wakhtigeeda, lacag kaydsato bil kasta, lacagna aad isticmaasho. iibsashada waxaad u baahan tahay (oo aad rabto).
Waxaad ku jirtaa miisaaniyad miisaaniyad heer sare ah.
Waa maxay sababta aan u qoondeeyo miisaaniyadda?
Dadka hodanka ah ayaa tan si fiican u yaqaan. Waa inaad miisaaniyad samaysaa, "si aad hanti u dhisto, u taajirto, u barato sida loo joogteeyo isku mid, iwm."
Sida muuqata, qof kastaa wuxuu raadinayaa tigidhka dahabiga ah ee hantida, halka sirta ay nala nooshahay maalin kasta. Dhibaatadu waxay tahay, dhab ahaantii kuma dhibno qaybta "samaynta", sababtoo ah waxaan ku qanacsanahay habka dhaqanka ee isticmaalka lacagta; Bixi intaad kasbato!
Waxa kale oo murugo leh, habkan caadiga ahi ma caawin qofna taajirnimo waxa uu si fudud uga dhigay korriinka taajirnimo.
Si aad si fiican ugu guulaysato maareynta lacagtaada, waxaad u baahan doontaa xisaab bangi oo gooni ah si aad u dejiso miisaaniyadda.
Maxaan ugu baahanahay xisaab bangiyo badan?
Fikradda xisaabaadyo bangiyo badan ayaa si fudud ugu dhawaaqa 'qas'. Waxay dareemeysaa inay wax uun sii adkayn doonto. Waa hagaag, marna runtii maahan kiiska, runtii waxay wax walba ka dhigeysaa mid aad u fudud!
Sirta miisaaniyad samaynta lagu guulaysto waa helida xisaabo bangi oo badan. Istaraatiijiyadani waxay la mid tahay in qof kale kuu qabto lacagtaada. Noqo maareeyaha lacagtaada adiga oo isku dubarida xisaabaadka bangigaaga iyo miisaaniyadaada.
Si ka duwan bangiyada caadiga ah oo dhammaan lacagta la isku geeyo iyadoo la helayo hal xisaab hubin iyo akoon kayd; Koontooyin badan oo bangi ayaa kaa caawinaya inaad lacagtaada u kala qaybiso baaldiyo kala duwan oo si fudud loo kala saari karo.
Labada xisaabood ee caadiga ah ee caadiga ah ayaa lagu heli karaa lacag badan. Aynu nidhaahno, waxaad ku jirtaa fasaxa usbuucaaga ee ka fogaanshaha xeebta oo si lama filaan ah waa inaad taabataa gurigaaga-dayactirka-lacagtaada si aad niyadda u yara kiciso, sababtoo ah waxay ku fadhiday isla akoon iyo qeylo dhaan, mashiinka dharkaaga ayaa hadda jabay. maalin ka hor. Oh! Dhaanso! Waxaad ku jirtaa xoogaa qas, runtii.
Bal hadda qiyaas haddii lacagtaas oo dhan ay u qaybsameen dhawr xisaabood?! Qalad ma jiro, midna. Waxaa si xanuun leh u cad in haysashada koontooyin dhowr ah ay awood kuu siineyso inaad ka warqabto oo aad ilaaliso waxa akoon kastaa uu matalo iyo sababta aadan wax isku mid ah ugu bixin karin wax kasta oo kale. Ma jiraan khaladaad! Sida aan jecelnahay inaan maqalno, "fudud peasy, liin macaan".
Sidoo kale, si aad u sii waddo oo u ilaaliso koontadaada badan, magac u bixi koonto bangi kasta; si aad si dhakhso leh u ogaato inaad haysato $ 567 dayactirka guriga iyo $ 723 sanduuqaaga fasaxa, iwm
Sharaxaad kale ayaa ah in bangiyada gaarka ahi ay burburi karaan ama gacan ka geysan karaan xiritaanka dhacdooyinka masiibada ah qaarkood. MarketWatch wuxuu ka hadlay dhacdooyinkii ugu dambeeyay halkay waxani ka dhaceen oo ay dadku ku habsadeen.
Waa maxay faa'iidooyinka lahaanshaha akoonno bangi oo badan?
Koontooyin badan oo bangi ayaa awood kuu siinaya inaad si dhakhso leh u garato waxa dollar kasta loogu talagalay. Waxay kaa caawinaysaa inaad u gudubto hadafkaaga weyn; hanti dhisidda. Runtii waa wax dhiirigelinaya inaad aragto naftaada oo horumar u samaynaysa ujeedooyinkaaga!
Ma jirto sabab aad uga xumaato kharash-garaynta lacagta, dareenka ka qoomamaynta in aad lacag ku kharash garayso waxyaabo aan macno lahayn ama raaxo leh, sida fasaxa, waa hal arin oo dad badani galaan. Miisaaniyadda iyada oo loo marayo xisaabaadyo badan ayaa dejisa xuduudaha iyo xuquuqda kharashka.
Markaad ogaato in sanduuqaaga gurmadka uu qiimihiisu yahay $ 15,000, oo aad haysato $ 745 sanduuqa dayactirka gurigaaga ama baabuurkaaga. Waad xiran tahay! Lacag caddaan ah ku bixi!
Dhinaca kale, haysashada xisaabaadyo dhowr ah waxay xaqiijinaysaa in gudahaagu ay waajib kugu tahay inaad lacagta u isticmaasho yoolkeeda.
Haddii ay intaas ka sii caawiso in aad edbiso hab-dhaqankaaga kharash-bixineed. Ogaanshaha inay tahay inaad 'maalgeliso' dhammaan akoonnadaada waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad yarayso iibsashada degdegga ah. Baro inaad miisaaniyada kharash garayso
Ku Habbee Xisaabtaada Bankiga 3 Tallaabo Fudud–Go'an, Kayd, iyo Kharashyo Kala Duwan
Ka dib marka aad samaysato miisaaniyad dheellitiran oo ku saabsan maaliyaddaada, adiga oo u qaybinaya xisaabaadkaaga bangiga saddex qaybood; go'an, maalgashiyo, iyo kharashaad doorsoomayaal ah, waa waqtigii miisaaniyadda la dhaqaajin lahaa.
Tallaabada 1: Lacagtaada u qoondee si go'an, Kayd, iyo Kharashaad kala duwan.
Waxay noqon kartaa mid fudud ama u adag sidaad rabto inay ku barato sida lacagtaada loogu maareeyo kharashyo go'an, maalgelin, iyo kharashyo kala duwan.
Qabso miisaaniyaddaada iyo 3 tilmaamood oo midabbo kala duwan leh, oo ku dhex mari khadka miisaaniyaddaada khadka. Dooro midabka qiimaha go'an, midabka midabka keydka, iyo midabka kharash beddelka ah.
XIDHIIDHKA: La-taliyaha Maaliyadda vs Maareeyaha Dhaqaalaha: Dulmar, Farqiga, iyo Waxyaallaha la mid ah
Markaad dhammayso kala -soocidda, markaa waxaad diyaar u tahay tallaabada labaad.
Tallaabada 2aad: sida lacag loo maareeyo loona diyaariyo akoonnada bangiga.
Ka dib marka ay iftiimiso miisaaniyadaada, waa waqtigii aad baran lahayd sida loo habeeyo xisaabaadka bangigaaga si aad si hufan u maamusho lacagtaada.
Habka ugu wanaagsan ee loo samayn karo xisaabaadkaaga bangiga waa inaad yeelato hal koonto oo ah kharashyo go'an, hal koonto kayd oo kuu kaydsada xoogaa lacag ah, iyo hal koonto jeeg oo ah kharashyo ku -talo -gal ah.
Aan sidan yeelno; soo saar xisaabiyahaaga oo soo koob qiyaastaada mid kasta oo ka mid ah saddexda qaybood ee xisaabaadka.
Wadarta kharashaadkaaga joogtada ah ayaa kuu sheegi doona inta lacag ah ee aad u baahan tahay inaad bishiiba ku haysato koontadaada bangiga ee “kharashaadka go’an” si aad u bixiso dhammaan biilashaada.
Qadarka kaydkaagu wuxuu kuu sheegayaa inta bil kasta aad u kaydin karto yoolalkaaga iyo xaddiga koontada hubinta ayaa kaa caawinaysa inaad u diyaargarowdo kharashyo aan caadi ahayn, xaaladaha degdegga ah, iyo laga yaabee, daryeel caafimaad.
Qaddarka miisaaniyadda ee doorsoomaha ah ee ka hadhay qoondayntaada waa inta lacag ah ee aad ku bixinayso bil gudaheed.
Taasi waa la aasaasay, waxaad diyaar u tahay talaabada 3 sidaa darteed.
ARAG SIDOO KALE: 10 Siyaabood oo La Xaqiijiyay oo Wax looga Qabanayo Kharashaadka Lama Filaanka ah 2022ka
Ugu dambeyntii, tillaabada 3: Siyaabaha Miisaaniyadda iyo Badbaadinta Keydka badan ama Hubinta Xisaabaadka
Waa inaad u qoondeysaa lacag kharashyada, maalgelinta, iyo waxa aad ka tagtay 'lacag caddaan ah oo la isticmaali karo'.
Lahaanshaha xisaabaadyo badan ayaa noqon kara wax badan, si kastaba ha ahaatee, halkii aad ku wada ridi lahayd hal koonto kayd oo waaweyn, si fudud u samayso wareejinta otomaatiga ah si aad lacagtaada ugu wareejiso xisaabaadka kaydka ee kala duwan.
Waxaa la mid ah lacagta aad maalgelinayso. Haddii aad rabto inaad lacagtaada kharashgaraynta u qaybsato qaybo kala duwan, sida cuntada, gaaska, ama dharka, waad samayn kartaa taas.
Si kastaba ha ahaatee, maskaxda ku hay inay suurtogal tahay inaad bixinayso khidmado bangi oo dheeraad ah dhowr koontooyin oo hubin ah. Markaa waxaa fiican in lacag caddaan ah la bixiyo maalin kasta oo mushahar ah loo qaybiyo baqshadaha ama dhalooyinka.
1. Hel bangigaaga
Haddii ay ku qanciso bangigaaga hadda, ka dibna ka raadi internetka si aad u aragto haddii (ku dhawaad ​​dhammaan bangiyada ay sameeyaan!) inay taageeraan xisaabaadyo badan.
Waxa ugu muhiimsan, markaa, waa in la arko waxa qaab -dhismeedkooda ujrada iyo shuruudaha ugu yar ee dheelitirka ay yihiin. Waxaa la joogaa waqtigii la raadin lahaa bangi cusub (ama urur deyn maxalli ah) haddii ay bixinayaan koonto kasta. Ha dejin nidaam dhammaystiran oo leh qaab -dhismeed mug leh. Taasi waxay jabineysaa hadafka iyo faa'iidooyinka.
Bangiyada Google ee xulashooyinka aaggaaga oo kaliya wicitaan u dir laanta. Taasi caadi ahaan way ka dhaqso badan tahay qoditaanka shabakadaha xogta internetka. Ama, adiga oo leh bangi onlayn ah (badiyaa khidmadaha ka hooseeya bangiyada lebenka & hoobiyeyaasha), waad fiicantahay inaad tagto.
XIDHIIDHKA: Haddii aadan joojin karin Diiwaangelinta otomaatiga ah ee Siriusxm 2 daqiiqo gudahood, Hel Caawimo Hadda!
2. Hayso koonto jeeg oo asaasi ah
Dhaqdhaqaaqa ugu horreeya, tani waxay ahaan doontaa meesha dhammaan lacagtaadu ku soo gasho.
3. Qor mudnaantaada maaliyadeed
Waxaad u baahan tahay inaad aqoonsato mudnaantaada marka laga reebo xisaabaadkaaga ay tahay inaad lahaato oo aad ka caawiso yoolalkaas lacagaha loo baahan yahay si ay u rumoobaan!
Xisaabaadka waa inay lahaadaan:
Kormeerka muhiimka ah
Sanduuqa dayactirka guriga
Sanduuqa dayactirka baabuurta ee baabuurta
Xisaabaadka ikhtiyaariga ah:
Sanduuqa shaqsiyeed ee kufsiga
Sanduuqa daaweynta xayawaanka
Sanduuqa Baabuurka / Guriga Cusub
Sida wax kasta oo nolosha ka mid ah, waxaad u baahan tahay inaad adeegsato habkan si aad u xusuusato dhawr dabin.
Qasaarooyinka Xisaabaadka Bangiyada Badan
Uma baahnid koonto supermarket, iyo mid lacag bixinta baabuurka, iyo mid dayactirka baabuurka, iyo mid kharash garaynta maalmaha dhalashada iyo mid kharash garaynta dharka, iyo mar kale.
Isticmaal habka xisaabaadka bangiyada badan, laakiin ha furin 20 koonto. Ha u isticmaalin si qaldan fadlan. Taasi waa wax aan fiicnayn iyo waqti lumis. Maskaxda ku hay, waxaad rabtaa inay tani noqoto mid sahlan, oo aan ka sii dhib badnayn.
Sidaa darteed, waxaad isku dayi kartaa inaad isticmaasho baqshadaha lacagta caddaanka ah, haddii aad u baahan tahay xisaab badan oo 'dhinac' ah. Miisaaniyadaha quusaya ee yar yar, sida qarashka dib -u -mideynta qoyska, waxaad isticmaali kartaa baqshadaha lacagta caddaanka ah, oo aad ku xaddidi karto $ 650 wax kasta.
Markaas Pitfall # 2-Guuritaan Farxad leh
In la fududeeyo waa sirta isticmaalka xisaabaadkan. Marar badan oo hore iyo gadaal ha u dhaqaaqin lacag. Waxay noqon doontaa mid adag, waqti lumis, iyo bangigaagu wuxuu kaa qaadi karaa lacag hawlo badan.
Nidaamkan, ha isticmaalin xisaabaadka kaydka. Xeerka D, Cap 6 ee Sharciga Federaalka; ayaa xaddiday inta macaamil ee aad ku samayn karto gudaha & ka bixista akoontiga kaydka ee bilaashka ah bil kasta. Tani waxay khusaysaa xisaabaadka kaydka ee bangiyada oo dhan.
Fikradda ayaa ah in la dejiyo xawilaad otomaatig ah oo dhammaan dhaqaalihii u wareejin doona xisaabaadka loogu talagalay.
Waxay u noqon kartaa mid wax weyn ka beddeleysa habka miisaaniyaddaada si aad u yeelato xisaab bangi oo kala duwan! Waxaan aad kuugu dhiirri -gelinayaa inaad tijaabiso oo aad aragto sida dhaqsaha leh ee yoolalkaaga maaliyadeed u dardar -galayaan!
Aad bay u faa'iido badan tahay inaad aragto guushaada! Si kastaba ha ahaatee, iska hubi inaad samayso cilmi-baaristaada oo aad hesho bangi ama bangi ku habboon rabitaanka cuntada kaydkaaga mise waxaan idhaahdaa, "awood kaydinta" hadda? Si sax ah u samee sharciyada Fam!
10 Eeyaha Ugu Cadowga Badan Adduunka 2022
Talooyin wax ku ool ah oo ku caawinaya marka aad Dalbanayso Amaahda
Dadka intiisa badan waa riyo in ay guri ama hanti la degto lahaanshaha laakiin inta badan arimahan...
Waa Maxay Dakhli Aan Shaqayn? Sidee U Shaqaysaa 2022?
Ogaanshaha farsamada maaliyadeed ee shirkaddaada waxay kaa caawin doontaa inaad aqoon fiican u yeelato shuruudaha maaliyadeed.…
25 Maalgashi ee Ugu Fiican Kanada 2022 | Tilmaan Buuxo
Dhammaanteen waan ognahay qiimaha shaqada adag, laakiin, inta badan, furaha guusha maaliyadeed…